फागुन ०२, २०७४ बिगुल
गौर, रौतहट, वृन्दावन नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा झडप हुँदा १९ जना घाइते भएका छन् ।
विश्रामपुरमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्र अन्य ठाउँमा सार्न लागिएको भन्दै स्थानीयवासीले नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले २१ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार दानीले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाको कार्यालय विश्रामपुरबाट साविक सबै गाविसको केन्द्रबिन्दु चमनपुरमा सार्न कार्यपालिकाको बैठक बसिरहेको समयमा विश्रामपुरका स्थानीयवासीले बैठककक्षमै प्रवेश गरी अवरोध गर्न खोजेपछि झडप शुरु भएकोे प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो ।
स्थानीयवासीले बैठकमा बसेका महिला तथा पदाधिकारीमाथि हातपात समेत गरेको नगर प्रमुख रामस्नेही यादवले बताउनुभयो । स्थानीयवासीको आक्रमणबाट पचासभन्दा बढी कुर्सी, झ्यालका सिसा, नगरपालिकाको निर्णय पुस्तिका नष्ट भएको नगर प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।
स्थानीयवासी रामनाथ सहनीले कुनैपनि हालतमा नगरपालिकाको केन्द्र सार्न नदिने बताउनुभयो । नगरपालिकाको कार्यालय यथास्थानमै रहनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले कार्यालय सार्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । -रासस
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४२०:२७
सौराहामा ‘हात्तीको वनभोज’, मीठामीठा परिकारमा रमाए…
रु १० लाख बराबरको विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ !
काठमाडौँमा आजबाट सवारीका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू , यी सवारीमा लागू हुँदैन नियम !
बसको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु !
सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक आह्वान
भक्तपुरको च्याम्हसिंहस्थित जीउमा दियो बाल्दै भक्तजन
जनमत सङ्ग्रहजस्ता आपत्तिजनक शब्द राखिएको बारे सरकारले जवाफ दिनु पर्छ – नेता रावल !